Wakiilka tababare Klopp oo ka hadlay wararka la xiriirinaya Bayern Munich – Gool FM
Wakiilka tababare Klopp oo ka hadlay wararka la xiriirinaya Bayern Munich
Liibaan Fantastic March 28, 2018
(Liverpool) 28 Maarso 2018 Tababare Jurgen Klopp ayaa si wayn loo la xiriiriyay shaqada kooxda Bayern Munich dhamaadka xiliciyaareed kaan.
Bayern Munich ayaa iska cayrisay bilowgii xiliciyaareed kaan tababare Carlo Ancelotti, kooxda ayaana dib u soo celisay Jupp Heynckes oo howl gab ahaa kaas oo lagu qasbay inuu hogaamiyo kooxda inta ka harsan xiliciyaareed kaan.
Laakiin wakiilka Tababare Klopp ayaa sheegay in tababaraha reer Jarmal uu heshiis ku la jiro Liverpool kaas oo gaaraya ilaa 2022, wuxuuna ka fogeeyay qabashada shaqada Bayern Munich.
“Klopp wuxuu ku la jiraa Liverpool heshiis gaaraya ilaa 2022, mana rumaysni inuu haatan ka tagayo kooxda” ayuu yiri wakiilka tababare Klopp.
“Waxaa haboon inaan iraahdo Bayern Munich dooq fiican ayeey u tahay Klopp laakiin shaqadaas waqtigaan munaasab uma ahan isaga”.
“Tababarida kooxaha ugu wayn yurub waa arin aad u soo jiita tababareyaasha laakiin waxaa haboon inay ahaato waqtiga ku haboon, waa sax oo Bayern Munich waxay raadinaysaa tababare cusub laakiin Klopp heshiis waqti dheer ah ayuu ku la jiraa Liverpool mana ku fikirayo inuu ka tago”.
DHACDO YAAB LEH: Carlos Teves oo Xabsi Dhaxdiisa ku dhaawacmay!!!!!
"Dhaawaca Messi Muhiim ma ahan.".